Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika
Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika
Kooxo burcad Koonfur Afrikan ah ayaa muwaadiniin Soomaaliyeed waxaa ay gduaha dalkaasi ugu geysteen dil iyo dhaawac iyo sidoo kale inay boobaan hantidooda.
Kooxaha Burcadda ah ayaa galay Saddex dukaan oo ku yaalla Magaalada Port Elizabeth ee Gobalka Eastern Cape Dalka Koonfur Afrika, waxana ay dileen muwaadin Soomaaliyeed halka ay dhaawac culus gaarsiiyeen mid kale oo Magaciisa lagu soo koobay Sayid Cali.
Mid kamid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in Kooxaha Burcadda ah ay dhac iyo boob hantiyadeed u geysteen laba Dukaan halka midka Saddexaad laga badbaadiyay.
Ciidamo ka tirsan booliska Koonfur Afrika ayaa tegay halka uuu werarka ka dhacay, iyaga oo sameeyay baaritaano la xiriira Kooxdii burcadda aheyd ee falkaasi ka dambeeyay wallow aan dad loo qaban.
Qaar kamid ah Ganacsatada Soomaaliyeed eek u nool dalka Koonfur Afrika gaar ahaan Magaalada Port Elizabeth ee Gobalka Eastern ayaa waxaa ay sheegeen inay cabsi xoogan soo wajahday, kaddib markii ay kordheen weerarada Soomaalida lagu haayo.
Dalka Koonfur Afrika ayaa xilliyada Sanad dhammaadka waxaa aad u kordha weerarada ka dhanka ah ajaanibta gaar ahaan Soomaalida iyo Itoobiyaanka, iyada oo aysan jirin cid ka hortagta ama wax ka qabata.